Hazo fanorenana eny an-tsena | Reef Resilience
Ny fepetra mahazatra eo amin'ny fampivoarana ny haran-dranomasina sy ny fampitomboana ny isan'ny mponina dia ny fametrahana ny zana-ketsa izay afaka manome haran-dranomasina marobe izay afaka ho velona sy hivoatra ao amin'ilay tranokala mba haverina amin'ny laoniny. Ny akoran-dalamby ho an'ny Coral dia singa manan-danja amin'io dingana io satria manome ny zanatanin'ny mpanjono izy ireo ka tsy miteraka fahavoazana goavana ho an'ny mponina.
Buoy manamarika tetikasa fanarenana ny haran-dranomasina ao amin'ny valan-javaboahary Curieuse Marine ao amin'ny nosy Curieuse, Seychelles. Sary © Jason Houston
Saha mifototra amin'ny sehatra, na in-situ, ny akanin-jaza ankehitriny no fomba mahazatra indrindra ampiasaina hampiakarana ny haran-dranomasina. Ireo fitaovam-pamokarana dia manaraka ny dingana ankapobeny amin'ny fanangonana tahirim-bolam-pambolena avy amin'ny mponina eny an-dalamby eo an-toerana ary hampitombo azy ireo amin'ny habeny mety ho an'ny fikajiana ny zaza amam-borona sy / na famolavolana ny vatohara voajanahary. Rehefa tafapetraka indray, in-situ Ny fitaovam-pambolena dia afaka manangona tahirin-tsakafo izay azo ampiasaina amin'ny tetikasa fampandrosoana ho an'ny mponina.
Tsy misy "fomba iray mifanentana amin'ny rehetra" manoloana ny famolavolana karaoty. Ny fahasamihafana amin'ny rafitra sy ny tetikasa dia efa nahomby manerana izao tontolo izao ary miankina amin'ny loharanom-pahazoan-dàlana, ny toe-piainana ara-tontolo iainana, mamela fitsipika, ary ny toetoetran'ny tranokala. Alohan'ny handoavana ny loharanon-kevitra amin'ny endrika manokana, dia omena torohevitra ny mpamorona pilote iray, na fitsangatsanganana fitsapana ary ampiasaina mba hanombanana ny fahombiazan'ny tranokala sy ny tetikasa alohan'ny fanalefahana ny tetikasa lehibe iray. Ny tetik'asa pilot dia afaka manalavitra na manamaivana ny famoizana tsy misy fandefasana sy tsy ilaina amin'ny programa famerenana amin'ny laoniny.
Ny famokarana haran-dranomasina dia manana tombontsoa maro, indrindra fa ny vidiny ambany sy ambany amin'ny teknolojia ambany. Na dia mety mitaky vola be amin'ny fotoana aza ireo zana-pambolena ireo, ny mpiasa tsy ampy fahaizana na za-draharaha, toy ny mpilatsaka an-tsitrapo na olom-pirenena, dia afaka manampy amin'ny fametrahana ireo vola ireo. Ny fitaovam-pambolena mifototra amin'ny sehatra dia mora kokoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana toy ny hafanana mafana na oram-batravatra mahery vaika izay mety manimba ny vatohara sy ny rafitr'ireo zaridaina. Noho izany, ny haben'ny zaridaina, ny toerana, ny halaliny, ny endriny ary ny rafitra dia zava-dehibe tokony hodinihina rehefa mikarakara sy manamboatra ny akanin-jaza. Ny fomba tsara indrindra ahafahana mampitombo ny fahombiazan'ny kolon-tany sy ny fahombiazan'ny fandaharam-pianakaviana dia aseho etsy ambany.
Ny famantarana ny toerana mety ho an'ny trano fialan-tsasatra ambanin'ny tany dia dingana iray manan-danja amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny programa famerenana amin'ny laoniny. Ireto manaraka ireto dia tokony hodinihina:
Fiarovana amin'ny fikorontanana - toy ny tafio-drivotra na ny onja mahery, ny fiovaovan'ny toetr'andro, ny fananganana amoron-dranomasina, na ny antony hafa mety hanimba ny vatohara. Izany dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny fametrahana akanin-jaza amin'ny faritra arovana tsara, toy ny amin'ny rano lalina kokoa (izay mbola ao anatin'ny faritra halalin'ireo karazan-javaboary mahazatra) na lavitra ireo asa fananganana amoron-tsiraka avela.
Fiarovana amin'ny fifaninanana sy ny biby mpiremby - toy ny sifotra mpiremby, kankana na trondro kintana, valanaretina aretina haran-dranomasina, na tonon-taolana marobe, spaonjy na haran-dranomasina tsy azo tazonina na tantanana.
Karazana ambany - Ny faritra feno fasika, korontam-bato ary substrate mafy dia mety mety amin'ny fiompiana haran-dranomasina avokoa fa miankina amin'ny firafitra manokana namboarina. Ohatra, ny rafitra mitsingevana dia mety ho tsara kokoa amin'ny tontolo feno fasika mba hampihena ny adin-tsaina sedimentation amin'ny haran-dranomasina.
Tontolo iainana - ao anatin'izany ny fahazoana hazavana, ny mari-pana amin'ny rano, ny fivezivezin'ny rano, ny masirasitra, ny sedimentation ary ny turbidity. Tolo-kevitra amin'ny ankapobeny ny fametrahana ireo akanin-jaza amin'ny halaliny sy amin'ny toe-java-misy izay ahalalana ireo karazana haran-dranomasina. Ny tsirairay amin'ireo antony ireo dia mety hisy fiatraikany amin'ny fitomboan'ny zanatany, ny fahavelomany ary ny fahasalamany amin'ny ambaratonga samihafa.
Ny kalitaon'ny rano - ny kalitaon'ny rano dia tokony hifanaraka amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina. Ny akaninjaza dia tokony ho lavitra ny loharanon'ny loto, ny maloto, ny rano velona, ​​na ny fantsakan-tsimanga. Ireo fepetra ireo dia mety hampihena ny valan'ny aretina sy ny fahafatesan'ny olona miady saina. Ho fanampin'izany, ny fikojakojana ny akanin-jaza dia mety hisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny rano ihany koa, indrindra raha toa ka mampitombo ny fitomboan'ny algaly ny tsy fahampian'ny rano.
Ny asan'ny olombelona sy ny fiantraikany - dia tokony ho kely indrindra ao amin'ny tranokala akanin-jaza, ohatra amin'ny fametrahana ny akanin-jaza amin'ny faritra arovana an-dranomasina (MPA) izay tsy misy fanerena sy fahasimban'ny jono. Na izany aza, zava-dehibe ny fiheverana hoe firy ny sambo mpitsidika na sambo hitsidika na hanakaiky ilay tranokala, izay mety hiteraka fahasimbana na hamerana ny fidirana amin'ireo hetsika mifandraika amin'ny akanin-jaza.
Site accessibility - fiheverana lehibe io mba hahazoana antoka fa afaka tonga mora foana amin'ilay tranokala ny mpiasan'ny akanin-jaza hanatitra fitaovana, hitaterana haran-dranomasina mankany sy avy amin'ny vatohara akaiky, ary hanao fikojakojana sy fanaraha-maso mahazatra. Ny fametrahana ny akanin-jaza amin'ny faritra marivo akaikin'ny tokan-trano dia mety hampitombo ny fidirana amin'ny garderie ary hampihena ny vidin'ny solika sy ny antsitrika.
Ny habetsaky ny garderie - Ny fotoana misy, ny teti-bola ary ny tanjon'ny fandaharana dia zava-dehibe amin'ny famaritana ny haben'ny garderie izay azo fehezina. Mandritra ny vanim-potoanan'ny drafitra, tadidio fa azo atao ny manitatra ny akanin-jaza, na eo aza ny fanitarana dia mitombo ny fanaraha-maso, ny fikojakojana ary ny haran-dranomasina hivoahana.
mamela - amin'ny toerana sasany, ny famerana ny fepetra takiana dia mametra ny toerana hametrahana akanin-jaza. Ny mpampiasa dia tokony hiara-miasa amin'ny maso ivoho fitantanana eo an-toerana mba hahazoana fahazoan-dàlana sy tranokala mifidy izay mety amin'ny fiompiana haran-dranomasina izay misoroka ny fifanolanana amin'ny fampiasana sy asa hafa.
Trano maro no nampiasaina tao amin'ny tanimboly mifototra an-tsaha mba hitazonana sy hampitombo ny sombin-tsakafo. Misy karazany roa lehibe: mitsinkafona (mihantona ao amin'ny tsanganana rano eo ambonin'ny sehatra) ary miorina (na eo akaikin'ny sefloor). Ny fomba isan-karazany dia manana tombontsoa sy miankina amin'ny loharanon-karena, fidiram-bidy, ary karazan-karena izay mamboly. Ireto ambany ireto ireo rafitra garderie mahazatra indrindra, miorina amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFampahalalana momba ny famerenana amin'ny laoniny an'i Caribbean Acroporamanokatra fisie PDF .
Fiaramanidina mitsambikina na midi-rano - Ireo firafitra ireo dia mazàna dia misy ny fampiatoana ny haran-dranomasina amin'ny tsipika na zana-kazo izay miraikitra amin'ny fanambanin'ny ranomasina miaraka amin'ny vatofantsika ary mihantona amin'ny alàlan'ny sambo ambanin'ny tany. Ny fampahalalana amin'ny antsipiriany dia hita ao amin'ny Case Studies 1, 2, 5 ary 6 ao amin'ny Caribbean Acropora Restauration Guide. Ny karazan'ireo rafitra mitsingevana dia misy ny hazo PVC sy ny Floating Underwater Coral Apparatus (FUCA). Hevitra lehibe:
Ireo rafitra ireo dia afaka mampitombo ny fitomboan'ny haran-dranomasina ary mampihena ny fihanaky ny aretina sy ny fandrobana, arakaraka ny toerana sy ny teknika ampiasaina. ref Na izany aza, ny fitomboan'ny haran-dranomasina dia mety hiteraka fihenam-bidy amin'ny haran-dranomasina, ka miteraka sombina marefo izay manelingelina ny fako. ref
Raha toa ny fikojakojana matetika dia tsy hitranga ao amin'ny akanin-jaza, ny rafitra mirenireny dia tsy ny safidy tsara indrindra satria ny fitomboan'ny haran-dranomasina ary ny fiterahana dia mety miteraka rafitra hamenoana sy hanimba ny vatohara.
Mila mahafantatra ny fifamoivoizana ny sambo ireo mpiasan'ny garderie ary tsy mamorona toeram-pitsaboana iray izay ho loza mitatao amin'ny fiaramanidina. Mety hitranga any amin'ny faritra misy fifamoivoizana ny sambon-danitra, na ny fahasimban'ny vatohara.
Ny fananganana tohatra dia tsy maintsy arahina amin'ny fomba izay mampihena ny mety ho fisian'ny fifandonana amin'ny fiainana an-dranomasina hafa, toy ny sokatra amoron-dranomasina na ny biby mampinono amin'ny ranomasina. Ohatra, ny fitaovam-pamokarana dia tokony hanana vondrona horita na vertika izay marefo (ohatra, vita amin'ny PVC) mba hisorohana ny rafitra tsy hipoaka ary hamoronana andalana tsipika sarotra ho an'ny biby handosirana.
Ny fametrahana ireo rafitra farafahakeliny 1 metatra ambonin'ny ranomasina dia mampihena ny fandrobana sy ny fandozana mandritra ny vanim-potoanan'ny angovo lehibe.
Raha toa ka manorina ny trano famokarana ao amin'ny faritra iray izay ahiahiana ny fandrehitra, dia mety hidina ambany ny mari-pahaizana ao an-trano mandritra ny mari-pamantarana avo lenta mba hampihenana ny mety hitrangany. Io hevitra tokana io ihany dia azo ampiharina amin'ny fepetra avo lenta toy ny oram-baratra, na dia mety hiteraka fiantraikany ratsy noho ny hetsika sand aza aza ny fandaniana loatra.
Nohamainina hatramin'ny farany ambany: Block Nursery - ireo firafitra ireo dia misy ny fiarovana ny haran-dranomasina mba hisakanana ny sakana na ny takelaka simenitra izay miorina amin'ny fanambanin-dranomasina. Nampiasaina be tany Florida ireo volavola ireo, fa ankehitriny dia nosoloina vatan-jaza na haran-dranomasina. Ohatra azo jerena ao amin'ny Case Studies 2 sy 3 ao amin'ny Caribbean Acropora Restauration Guide. Hevitra lehibe:
Ny fitaovam-pandraharahana dia mety ho safidy tsara indrindra ho an'ny tontolo manodidina ny toerana misy ny zana-ketsa na faritra izay mety ho loza mitatao amin'ny seranan-tsambo.
Ny rafitra Benthic dia tsy maintsy manana fahasamihafana ampy mba tsy hisian'ny rivotry ny tafiotra. Azo atao izany amin'ny fampiasana vatomizana na rafitra fiarovana tahaka ny Duckbill na Helix (ankeriny) na ny rivotra voapetraka ao anatin'ilay sediment. Ilaina ny mitandrina mba hisorohana na hanamaivanana ny fahasimbana amin'ny vatohara voajanahary na toeram-ponenana hafa.
Ny fizotry ny fivalanana eo amin'ny pucks (horizontal vs. vertical) dia mety hisy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny haran-dranomasina, ny fivelomana sy ny fambolena, ary tokony hovaliana mandritra ny fandaharam-pampianarana. ref
Tokony ampy ny habaka eo anelanelan'ny trano fisakafoanana mba ahafahan'ny mpitaingina manodina azy ireo amin'ny fanarahamaso sy ny fikojàna tsy tapaka ary tsy manimba ny vatohara.
Ny toeram-pamokarana sy ny vatohara eo amin'ny fananganana rafitra dia tokony hampitaina amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny asa ary hampihenana ny fanangonana ny angon-drakitra.
Ny tarehimarika sy ny fikajiana ny haran-koditra azo antoka amin'ny blocs dia tokony hiorina amin'ny lanjany izay hitombo ny sombin-tsakafo alohan'ny hipoitra indray. Tokony hialana ny famerenan-danja ny vatoharan-tsambo, satria izany dia mety hampidina ny fitomboan'ny haran-dranomasina sy ny sampana.
Teti-bozaka simenitra ampiasaina amin'ny fampiakarana ny Acropora cervicornis amin'ny toeram-pitsaboana. Sary © Elizabeth Goergen, NOVA Southeastern University.
Nohamainina hatramin'ny farany: Fiompiana rindrina - ireo rafitra ireo dia tafiditra ao anatin'ny rafitra metaly na plastika na rafitra PVC izay mifatotra amin'ny seaflooran'ny rafitra fiarovana. Ny rafitra sasany koa dia mampifandray ireo faribolam-panamboarana ravina misy tsipika mihantona eo amin'ny sisiny. Ohatra azo jerena ao amin'ny Case Studies 1 sy 4 ao amin'ny Guide Carpet Acropora Restoration. Ny fitaovam-pambolena dia ahitana A-frame, tetezana, ary famokarana angovo PVC. Hevitra manan-danja:
Tahaka ny famokarana sakafom-barotra, dia tokony hipetrapetraka ao anatin'ny garderie ny rafitra mba ahafahana mivezivezy mora foana ho an'ny mpanararaotra ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ny fikarakarana. Ny fialan-tsasatra dia tokony hamela ny famelomana ny zatovo araka izay ilaina.
Ny elanelan'ny haran-dranomasina amin'ny zana-kazo dia tokony ho mifanalavitra amin'izay ahafahan'ny haran-dranomasina maniry tsy misy be loatra alohan'ny hetsika fisarahana manaraka. Ny fialan-tsasatra amin'ny banga dia atoro anao raha sendra misy fizarazaran-javatra manaraka. Ny elanelana misy eo amin'ny haran-dranomasina dia mamela ny fanadiovana mora kokoa ny vata.
Ny moron-koditra eo amin'ny sisiny dia tokony ho tsara lavitra noho ny ranomasina, mba hampihenana ny fihoaran'ny haran-dranomasina, ny fisakafoanana, na ny tsindry hafa.
Ny haben'ny tambatotra amin'ny rindrina dia mety hisy fiantraikany amin'ny fipoahan'ny vatan'ny vatam-paty. Ny haben'ny masera kely dia afaka manome teboka bebe kokoa ho an'ny haran-dranomasina, nefa koa ny fanjanahana matetika kokoa amin'ny famonoana azy. Ny haben'ny 10-15 cm amin'ny haben'ny masinina dia nomena torohevitra mba hampidina ny fiainana an-tany noho ny fanirian-dray aman-dreny sady manome teboka ampy tsara.
Raha toa ka tsy mety ny safidy tsara indrindra amin'ny tontolo manodidina ny angovo azo antoka toy ny faritra misy rivo-doza matetika, ny PVC dia mety ho ny safidy maoderina satria ny rafitra maoderina amin'ny PVC dia mety hiteraka korontana ho an'ny sambon-danitra ary hanjary hivezivezy matetika kokoa noho ny rafitra hafa mandritra ny tafiotra.
Ohatra an'ny PVV iray napetraka teo amin'ny fonosana. Sary © Elizabeth Goergen, NOVA Southeastern University
Ity ambany ity ny fampitahàna ny tombontsoa sy ny tsy fahampian-tsakafo ho an'ny karazam-pitaovana tsirairay (Carroll Acropora Restoration Guide, pg. 16).
Fanaraha-maso sy fikojakojana ny fiterahana
Ny fanaraha-maso sy ny fikojakojana ny rafi-pambolena sy ny fikojakojana ny saha dia dingana manan-danja amin'ny famenoana ny vokatra ho an'ny haran-dranomasina sy ny asa fanabeazana. Satria tsy ilaina ny fahazoana asa na ny fahaiza-manao mahazatra, dia azo ampiasaina mba hizarana ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana ireo asa ireo. Maro ireo mpilatsaka an-tsokosoko milefitra an-tariby, mpitaingin-tsoavaly, na mpanjono eo an-toerana mandritra ny vanim-potoana ivelan'ny fanampiana amin'ny fikarakarana ny zana-ketsa. Ny fikojakojana ny zana-pokonolona mahazatra sy ny asa fanaraha-maso ny haran-dranomasina dia aseho etsy ambany.
Ny fanesorana vatana mangatsiaka, izay mety mahatonga ny fahafatesan'ny vatohara sy ny famolavolana rafi-pambolena miroborobo sy matanjaka kokoa. Ny zavamananaina fandoroana dia misy alika, sponges, valan-javamaniry, hydroids, alga, mozika, moules ary barnacles
Fanesorana ireo biby mpihaza haran-dranomasina, toy ny sifotra, afoofeno, ary ny fandriam-pahalemana
Fanamafisana ny sombintsombin'ny haran-dranomasina izay nanjavona na simba
Fanamboarana na fanoloana ireo trano famakiam-pitaterana simba, toy ny fitaovana famafàna simba, rafitra fanamafisam-peo, na tady marika
Hamarino sy ampifanaraho ny fikorontanan'ny toeram-pambolena ao amin'ny garderie
Famafazana sy / na fisarahana ny sombintsombin'ny haran-dranomasina miaraka amin'ny mariky ny aretina (jereo misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCCRES Karatra ID eny ambanivohitramanokatra fisie PDF ho an'ny aretin'ny vatohara)
Fanamboarana na fametrahana fitaovana ho fampiroboroboana ny trano famakiam-boky mba hampitomboana ny tahirin-tsakafo ho an'ny fambolena
Fianakaviana Coral Monitoring
Fiainana velona sy ampahany amin'ny fiainana an-tany (anisan'izany ny antony mahatonga ny fiainana an-tany). Ny fanadihadiana vao haingana dia manondro ny fanamarihan'ny 80% tafavoaka velona amin'ny sombintsombin'ny staghorn ao amin'ny garderie mandritra ny taona voalohany aorian'ny fanangonana. ref Ny fialana amin'io vidin'entana io dia azo ampiasaina ho fampitandremana aloha na marika fa ny fanitsiana ny zaridaina dia mila atao mba hanatsarana ny fahasalaman'ny haran-dranomasina
Fahasalamana ara-pahasalamana, anisan'izany ny fitrandrahana, ny fijanonana, ny aretina, na ny fihantsiana. Afaka mampiasa satelita na sambo ianao mandritra ny fotoana mafana misokatra amin'ny varavarankely vaovaotahirin-kevitra na manamboatra tobin-tsakafo kely kely ao amin'ny garderie
Ny fitomboan'ny vatohara mba hamaritana raha mety hitranga ny sombin-tsakafo aoriana na hanolotra angona ho an'ny fampitahana marika